Somaliya Oo Soo Saartay Amaro Cusub Oo Lagu Xakamaynayo Faafitaanka Coronavirus - Borama News Network %
Dowladda Soomaaliya ayaa ku dhaawaqday in maanta la xirayo dugisayda Quraanka Kariimka iyo Mawlacyada lagu barto Diinta ee ka furan wadanka, si looga hortago faafida xanuunka Covid-19.
Wasiirka ayaa intaa ku daray in ka hor inta aysan qaadan go’aanka lagu xirayo dugsiyada ay wada-tashi la sameeyeen dhinacyada ay qusayso.
“Inta aanan la wadaagin bulshada Soomaaliyeed waxaan kala tashanay culumada iyo maclimiinta waxaana u sheegnay khatarta uu cudurkan leeyahay iyo caruurta dugsiyada isugu imanaysa”, ayuu yiri Mr Sheekh Nuur.
Wasiirka ayaa intaa ku daray in markii dowladda ay caruurta ka fasaxday iskuulada ay hadana isugu tageen dugsiyada taasi oo sii xoojin karta halista faafida cudurka Corona.
“Caruurtii dugsiyada ayay isugu yimaadeen, waxaan uga dignay khatarta ka dhalan karta qol afar mitir ah marka ay intaas oo arday ah isugu yimaadaan dhibaatada ka imanaysa “, ayuu yiri wasiirka diinta.
Wasiirka ayaa farta ku fiiqay in Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta ay mas’uuliyad ka saarantahay qaadashada kaalinteeda ilaalinta badqabka iyo caafimaadka bulshada.
Sheekh Nuur Maxamad Xasan ayaa xusay in amarkan lagu xirayo dugsiyada quraanka uu ka dhaqangali doono dhammaan maamul goboleedyada dalka.
“Go’aankan waxaan rajaynayaa inuu ka dhaqangalo maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda fedraaalka dhammaantood inuu wada saameeyo ayaan rajaynayaa,” ayuu yiri Mr Sheekh Nuur.
Dowladdu fedaraalka ee Soomaaliya ayaa horey waxay u joojisay waxbarashadii iskuullada iyo jaamacaddaha dalka si cudurka looga hortago.
Dalka Soomaaliya waxaa ilaa iyo imika la xaqiijiyay oo cudurka laga helay sedex qof inkastoo midkood la sheegay inuu ka bogsaday cudurka.
Cudurkan Corona ayaa fara ba’an ku haya guud ahaan caalamka waxaa uuna soo ritay boqolaal kun oo qof isaga oo guur dhammaa shanta qaaradood ee caalamka.
Waxaa cudurka ilaa iyo imika u dhintay dad kor u dhaafaya 36,000 oo qof guud ahaan caalamka
Taliska Ciidamada Xooga Dhalka Somaliya Oo Ka Warbxiyay Hawlgalka Ciidanka Ee Shabeelaha Hoose
Dowlada Somaliya Oo Ku Raad Joogta Dadkii La Kulmay Muwaadinka Laga Heley Coronavirus
Bnnstaff Bnnstaff March 23, 2020
Maraykanka Oo Beeniyay In Uu Ku Leg Lahaa Isku Day Afgambi Oo Ka Dhacay Dalka Venezuela
Bnnstaff Bnnstaff May 6, 2020